अन्तिम सत्य अवस्थित छैन? मार्टिन भिजल्याण्ड
अन्तिम सत्य अवस्थित छैन?
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	18 मई 2019 मा	•6टिप्पणिहरु
राम्ररी ज्ञात रेडियो होस्ट मैक्स इगानको अनुसार (तल रेडियो प्रसारणमा, YouTube भिडियो हेर्नुहोस्), तपाईं प्रत्येक सिद्धान्तको लागि प्रमाण पाउन सक्नुहुन्छ र वास्तवमा अब कुनै पनि तथ्य खोज्न को लागी कुनै उद्देश्य छैन। उदाहरणका लागि, तिनी भन्छिन् कि फ्ल्याट पृथ्वीको लागि प्रमाण छ, जस्तै खोखोला पृथ्वी वा राउन्ड पृथ्वीको लागि वा विदेशीहरूको अस्तित्वको लागि। वास्तवमा, उनको प्रस्ताव यो हो कि तपाईं सिद्धान्तमा गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि सिद्धान्त वरिपरि प्रमाणहरू सिर्जना गर्नुहोस्। भिडियो त्यस अर्थमा सुन्न लायक छ, किनभने यसले उपयोगी चीजहरू बताउँछ र हामीलाई कसरी 'एलिस इन वन्डर्यान्ड खरगोश छेद' मा फेरि कसरी हेर्छ जस्तो देखिन्छ।
कुन आईगन रिपोर्ट गर्न असफल भएको छ कि जानकारी को नियन्त्रण यति बलियो छ कि वैकल्पिक मीडिया को घुसपैठ को रूप मा, उदाहरण को लागि, फ्लैट पृथ्वी 'सच्चा समुदाय', फेरि एक मान्छे को लागी कब्जा गर्न को लागि एक स्मार्ट तरीका हुन सक्छ नयाँ सुरक्षा नेट। सरकारहरू सबै ठूला डेटा विश्लेषणहरू छन् जुन उनीहरूले पत्ता लगाउन चाहन्छन् कि सुरक्षा नेटमा एक छेद बनाइन्छ, ताकि तिनीहरू नयाँ सुरक्षा नेट सेट अप गर्न सक्दछ वा पुरानो सुरक्षा नेट रणनीतिकर्ताले नयाँ भाग लिन सक्दछन्। समात्न।
धेरै सिद्धान्तहरू जो इन्टरनेटमा जान्छ जानबूझेर राजनीति र मिडियाको वास्तविक धोखाधारीलाई यस्ता आन्दोलनहरूमा लिङ्क गर्न को लागी सुरू गर्न थालियो, ताकि तिनीहरू अन्ततः चारै तिर फर्केर जान सक्छ। तपाईं प्रवाह बढ्न अनुमति अन्ततः अन्ततः सत्य समुदायसँग जोडिएको निश्चित सिद्धान्तहरूलाई बेकार हुन छोड्छ। उदाहरणको लागि, तपाईं 911 'flat earth movement' मा एउटा प्लट लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले त्यसपछि देखाउनुभयो कि फ्लैट-पृथ्वी सिद्धान्त चट्टान-कडा बकवास हो, तपाईं एकै समयमा सबैको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यो 'गंदा स्नान पानी' को रणनीति हो ताकि तपाईं अंततः बच्चाहरु लाई पानी को पानी संग फेंक सकते हो। हामीले पनि आध्यात्मिक सत्य वा सजगता झूठहरू समावेश गर्ने विधि देखेका छौं, वास्तविक संकेतहरूसँग मिलेर। तपाईंले ती आधा-सत्यहरूमा बनाउनुहुन्छ वा सही पल मा बम सक्रिय गर्न र बोर्डमा अशक्त जहाजको डूब गरिएको व्यक्तिलाई पराजित गर्न सुरक्षा नेट जहाजको तल निस्कन्छ। वास्तविक आचरण धेरै गन्दा छन् र उनीहरूको विश्वासमा रहेको समूह अब आधा-डूबिएको छ कि उनीहरु फेरि आफ्नो औंलाहरू जलाउन चाहँदैनन्; बाँकी द्वारा मोर गरिएको छ।
हामीले कम्तिमा टिप्पणी गर्न सकेनौँ कि हामी अक्सर इतिहासको झूठातासँग सामना गरिरहेका छौं र हामी कतिवटा ऐतिहासिक इमारतहरू बनाइएका छैनौं (जस्तै मैक्स इगानले तल भिडियोमा उल्लेख गर्दछ)। तथ्य यो हो कि अधिकांश सिद्धान्तहरु अन्ततः विश्वास प्रणाली मा आधारित हुन्छन्। यद्यपि, केक्स आईगनले धेरै चालाक रूपमा बोल्दछ (बोल्नेको ज्ञात सम्मोनिक तरिकाको साथ) पुरानो ऐतिहासिक इमारतहरूको बारेमा ज्ञानको अधिग्रहण र इतिहास को झूठिकरण गर्न आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्नु हो। यद्यपि, मेरो विचारमा, यो इतिहास विरूपण केवल जनतामा भ्रष्ट राख्न को लागी केवल 1 भाग हो (अक्सर झूटा तर्कहरू प्रयोग गरियो)। यदि हामी केवल मीडिया को दैनिक स्थिति को पालन गर्छन, हामी जल्द नै खोज्छ कि न केवल इतिहास हेरफेर किया जा रहेको छ, तर वर्तमान मामलाहरु पनि। वास्तवमा, तपाईं यस निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुनेछ कि इतिहासको यो हेरफेर वास्तवमा हामीलाई खुसी राख्न को लागी उत्प्रेरित गर्छ।
यो एक धेरै विश्वसनीय विश्लेषण छ कि मैक्स इगानले साथ आउँछ, तर मलाई अझै बलियो भावना छ कि Igan सम्मोहन वार्तालाप प्रविधिको प्रयोग गर्दछ, प्रसिद्ध ज्ञात तस्विरहरु संग संयुक्त र त्यो वास्तवमा एक नयाँ सिरप ज्या / ब्याट बक्स राख्नु हो।
वास्तवमा, हामीले पहिले नै स्टेजमा पुग्यौं जहाँ धेरै 'सत्य समुदाय' को डबल तलमा निर्मित बमहरू पहिले नै सक्रिय भएको छ। धेरै मानिसहरूले पत्ता लगाएका छन् कि उनीहरूको सिद्धान्त सिद्धान्तहरू गलत थिए र यसैले बेपत्ता भएका छन्। त्यस समूहका केही समूहहरू फेरि मुख्य सुरूवात मीडिया र राजनीतिसँग जोडिएका छन् किनभने तिनीहरू 'खरगोश छेद'सँग सजग हुन्छन् र पत्ता लगाउँछन् कि एक सिद्धान्तमा केही गलत छ। अरूलाई अगाडि पुरुषहरूको हेरचाह गर्नु पर्छ जसले तिनीहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ (वर्षको लागि म्याक आईगन जस्तै) यो 'खरगोश छेद'।
आईजीनले हामीलाई 5G सञ्जालहरूको खतरामा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छ, किनभने उनको अनुसार हामी एक प्रणालीमा जान्छौं सबै ज्ञान जाँच गरियो (जसको मतलब हामी फेरि कहिल्यै नहीं गर्नेछौं वास्तविक एक इतिहास खोज्नुहोस्)। मलाई विश्वास छ कि यो मामला हो होइन 5G सञ्जालहरूको निर्माण पछिको अन्तिम खतरा। 5G को खतरा ब्रेक-क्लाउड इन्टरफेस र क्लाउडबाट CRISPR-CAS12 विधि मार्फत मानव डीएनए हेरफेर गर्ने सम्भावना हो (यो महत्त्वपूर्ण हेर्नुहोस्। व्याख्या)। जहाँ, मैक्स आईगानको अनुसार, 5G सञ्जालहरूले हामीलाई हाम्रो अस्तित्वको साँचो इतिहासलाई कहिल्यै पत्ता लगाउनदेखि रोक्न सक्नेछन्, उहाँले त्यहाँ हाम्रो ज्ञानलाई ध्यान दिनुपर्ने साँचो ज्ञानमा राख्नुहुन्छ। 5G सञ्जालहरूले 'केही समूहहरूको लागि ज्ञान समाप्ति' ल्याउने थिए। मेरो विचारमा यो ज्ञानको बारेमा छैन। यो हाम्रो संसारको इतिहासको बारेमा संरक्षित ज्ञानको बारेमा होइन। त्यो भनिन्छ 'वास्तविक इतिहास राखिएको' ठीक सायद हो जुन "साँचो ज्ञान" को सिरप बर्तनमा तपाईंलाई तुरुन्तै पर्छ। त्यो भनिन्छ "इन्टरनेट" जुन इन्टरनेटले हामीलाई प्रदान गर्दछ, हामीलाई केवल एप्पलको बगैचाबाट एप्पल हो: ज्ञानको पेचको प्रलोभन (असल र खराब)।
यो 'प्रलोभन हो'ज्ञान छ कि इन्टरनेट प्रदान गर्दछ"यसले हामीलाई भ्रम दिनेछ कि हामी"लुकेको ज्ञान'फेला पार्न सकिन्छ यदि हामीले सबै वास्तविक जानकारीको लागि निःशुल्क पहुँच गरेका थियौँ (जुन वास्तवमा इगानले बढाउँछ)। आईगनको अनुसार हामी वास्तवमा यसको पहुँच हुनेछौं सबै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ (इन्टरनेट मार्फत)। वास्तवमा, आईगगानले हामीलाई इन्टरनेटमा पहुँच गर्न प्रोत्साहन दिन चाहन्छ सम्पूर्ण एप्पल को बजाय जानकारी को एप्पलबाट सानो काटन (एप्पल लोगो हेर्नुहोस्) जुन हामी अहिलेसम्म स्वाद गर्न सक्षम छौं। वास्तवमा, हामीले ज्ञानको सम्पूर्ण रूखमा पहुँच हुनु पर्दछ।
यदि तपाईं तथापि गर्नुहुन्छ वास्तविक खतरा 5G को र केवल भनिएको छ कि विकिरण खतरनाक छ र तब भन्छन् कि यो नेटवर्क "सत्य ज्ञान" को लागि निश्चित रूप देखि बंद हुनेछ, तपाईं यस तथ्य को उल्लेख गर्दैन पूर्ण रूपमा इन्टरनेट यसको विपरीत, यो स्थिति पुग्न को लागी घृणा गरिएको छ जसमा हामीले लगभग आर्यौं। यो इरादा हो कि हामी ज्ञान को त्यो पेड संग जोडिएको छ। हामी तपाईंलाई रूखमा काटेर जोड्ने बित्तिकै ज्ञानको रूखमा जोड्नु पर्छ। मानव मस्तिष्क र मानव डीएनए प्रविष्टि गर्नु पर्छ क्लाउड ढोकामा आउनुहोस्।
"साँचो इतिहास" खोजको लागि हामीले हामीलाई दिशाको दिशामा ध्यान दिनुपर्छ Apple tree त्यसोभए कि हामी असीमित रुपमा यो लिंक गर्न सक्दछौं। अझै पनि, म्याक्स आइगनको भिडियो हेर्न लायक छ। तथापि, ध्यान राख्नुहोस् कि वास्तविक (लुकेको) ज्ञानको खोजी सटीक रूपमा सिरप छ जुन तपाईं ज्ञानको रूख तिर जान्नुपर्दछ (तपाइँ रूखमा फ्याँक्नु पर्दछ)। त्यसैले Igan यहाँ 'गार्डन ईडन' कथा बाट साँपको भूमिका खेल्छ।
म सजिलैसँग शब्द स्याउ माथि एप्पलको रूपमा लेख्छु, किनकि तपाइँले देख्न सक्नुहुनेछ किन त्यो नाम तपाईको एप्पल आइफोनको लागि रोजिएको थियो
म पनि तपाईंलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु कि त्यहाँ मानवता को एक महान अयोग्य अंतिम धोखा हुन सक्छ। तपाईं पनि भन्न सक्नुहुनेछ कि यो अझै अर्को सुरक्षा नेट हो। यद्यपि, यदि हामी इतिहास को झूठे देख्छौं र कसरी ब्यस्त ब्यक्तिहरुलाई साँचो इतिहास लुकाउने जस्तो लाग्छ, हामी फेरि उप-क्षेत्रमा केन्द्रित छौं। यदि हामी पत्ता लगाउँछौं कि वर्तमान घटनाहरू पनि हेरफेर गर्दै छन् (र यसैले मात्र इतिहास मात्र हेरफेर गरिएको छैन), हामी पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि हामीले हेरचाह भन्दा हेरफेर धेरै अधिक व्यापक छ। यसैले म तपाईलाई यो कुरा चाहन्छु कि हाम्रो सम्पूर्ण "वास्तविकता" एक हेरफेर धारणा हो। यदि क्वांटम भौतिकी (डबल स्लिट्स प्रयोग को माध्यम ले) देखि थाहा छ कि हामी एक अनुकार मा रहछन, तपाईं तर्क गर्न सक्छ कि एक सिमुलेशन मा दुवै इतिहास र वर्तमान घटनाहरु वास्तविक समय मा हेरफेर गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं एक 'मल्टीप्लेयर' सिमुलेसनबाट सुरू गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईं एकै हेरफेर प्रविधि मार्फत सबै खेलाडी साथसाथै समक्ष गर्न सक्नुहुन्छ।
यो विचार जुन हामी सिमुलेसनमा बाँच्न सक्दछौं, जसमा 'आत्मा' पर्यवेक्षक / खेलाडी हो (बहुभाषी खेलमा), पूर्ण रूपमा विरूपित वा अर्को गल्तीको रूपमा (नयाँ 'खरगोश छेद') को रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि म यो कुरा गर्न चाहान्छु कि यो तपाईको सबै प्रश्नहरूको जवाफ राम्रो हुन सक्छ र तपाइँका सम्पूर्ण खोजीहरूको अन्त्य बिस्तृत हुन सक्छ। कुनै पनि अवस्थामा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी पत्ता लगाउँछौं कि हामी स्थायी रूपमा 'ज्ञानको पेटी' मा संलग्न हुनुहुन्न, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी सधैँ नयाँ 'खरगोश छेद' मा डुब्न सक्दैनौं।
को डबल स्लेट प्रयोग थाहा छ कि संसारको समृद्धि गर्नु अघि एक पर्यवेक्षक आवश्यक छ ('को लागि पर्यवेक्षकको आँखा')। यो सिद्धान्त राम्रोसँग बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यो हो किनकि पर्यवेक्षक यस भौतिकृत संसार को बाहिर छ (यो हेरफेर धारणा)। हामी "आत्मा" वा जुन हामी यो कल गर्न चाहानुहुन्छ दर्शकको रूपमा परिभाषित गर्न सक्दछौं। यो कतिजनाले सोच्दै यो पुनरुत्थान र विभिन्न धर्मका विश्वासीहरू विश्वास गर्छन् कि यो स्वर्ग वा नरक जान्छ। त्यो बाह्य पर्यवेक्षक तब हो, जस्तै यो थियो, व्यक्ति हातमा नियन्त्रक संग सोफे मा बसेर र तपाइँले तपाइँको प्लेस्टेशन खेल खेल्दा आफ्नो स्क्रिनमा हेरिएको भौतिकी संसार हो।
यदि हामी सिमुलेशन मोडेलबाट सुरु गर्छौं, त्यहाँ दुवै छन् अनुकारको बिल्डर भन्दा खेलाडीहरू। एक खेलाडी भनेको निर्णय हो; आफ्नो हातमा नियन्त्रक संग व्यक्ति जसले स्क्रिनमा अवलोकन देख्छ र पर्दामा पाङ्ग्रालाई नियन्त्रण गर्दछ। कार्यक्रम को स्रोत कोड को संभावनाहरु को निर्धारण गर्दछ। यी सम्भावनाहरू सिमुलेशनसँग सम्बन्धित कानुनी नियमहरूमा राखिएको छ (हामी मान्न सक्छौं कि हामी अनुकरणमा बस्छौं)। उदाहरणका लागि, हामी गुरुत्वाकर्षण वा उज्यालोपनको गतिलाई प्राकृतिक नियमहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्छ र हामी वृद्ध हुन्छौं, हामी बिरामी वा मर्छन्। ती खेलका नियमहरू हुन्।
जब हामी त्यो हेर्न शुरु गर्छौं, हामी जान्दछौं कि हामी जैंट्ज, पियटिजी, मरिना वा अरू कोही होइनौं, तर हाम्रो शरीर र मस्तिष्क केवल खेल (एक mutliplayer सिमुलेशन) मा कठपुतली हो। तपाईं वास्तवमा हुनुहुन्छ एक अवलोकन (सहभागी / खेल्ने) आत्मा एक अनुकरणीय वास्तविकता मा जसमा सबै कुरा हेरफेर गर्न सकिन्छ।
एक पकड पाउनुहोस्
मैले मक्स आईगनसँग निश्चित रुपमा सहमत छु कि हामीले आफ्नै हातमा मुद्दा लिन चाहन्छौं। यो पहिले हाम्रो वास्तविकता को सार को समझ को लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले म सुझाव दिन्छु यो लेख यसलाई राम्ररी पढ्नुहोस्। यसमा, म विस्तारमा सिमुलेशन मोडेलको व्याख्या गर्दछु र म पनि व्याख्या गर्दछु किन स्वतन्त्रताको नियम सधै लागू हुनेछ। यदि तपाई साँच्चिकै यो गर्नको लागि समय लिनुहुन्छ भने, तपाइँ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईंको विकल्प परिणामको लागि निर्णायक हो। यसको अर्थ तपाईंले सक्रिय रवैयामा (संभवतया) निष्क्रिय मनोवृत्ति परिवर्तन गर्नु पर्छ। राम्रो, यो छैन, तर यो "बुद्धिमान" हुनेछ। यसको अतिरिक्त, यदि तपाईंले पत्ता लगाउनुभयो कि यो महत्वपूर्ण प्रभाव हो जुन तपाईंको जीवनमा छनौट गर्दछ, तपाईंसँग वास्तवमा त्यसो गर्न इच्छा र इच्छा पनि हुनेछ। सँधै ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईं वास्तवमा हुनुहुन्छ। तपाईं मानव अवतार होइन, जुन अहिले यो कुर्सी कुर्सीमा पढिरहेको छ। त्यो केवल खेलमा कठपुतली हो जुन तपाईंले (तपाईंको आत्मा) बुझ्यो।
यसको बारे सोच्नुहोस् र पकड पाउनुहोस्! आफ्नो जीवनको चार्ज लिनुहोस् र अब यो 'माथिबाट' अपेक्षा गर्नुहोला।
5G र मानिसको ट्राफुमेमेनमेन्सन
शरीरको आफ्नै डीएनएबाट मुद्रित अंगहरू एक तथ्य हुन्: यहाँ पहिलो 3D मुद्रित हृदय हेर्नुहोस्
रोबोटहरूले हाम्रो कामलाई जित्न भने हामी के गर्नेछौं?
किन एलोन मास्कको स्किनेट, न्यानोटेक र टीकाले एसिन्सनको अनुभव गर्नेछ
टीकाकरण को लागी धक्का को लागि बाल हेरचाह संगठनहरु तैनात, Berend Botje डेयरकेयर बच्चाहरु लाई इन्कार गर्दछ
ट्याग: 5G, साजिश, साजिश सिद्धान्तहरू, विशेष, इतिहास, इतिहास झूटाकरण, Igan, अधिकतम, सत्य, खोज्नुहोस्
18 मई 2019 मा 18: 32
सिद्धान्तको साथ शुरू हुँदैन, तथापि तथ्यहरूसँग।
18 मई 2019 मा 21: 09
फ्लैट कानुनहरू साँच्चै राम्रो तरिकाले सिद्धान्तहरूसँग आउँछन्। उनीहरूले कहिलेकाहीँ परमाणु, प्रोटोन्स र न्यूट्रनको बारेमा कुरा गर्छन जुन मलाई सोच्न सकिन्छ। यदि तिनीहरू स्क्वायर थिए भने सबैले मात्र minecraft जस्तै। पृथ्वी र हाम्रा शरीरका कोशिकाहरू यति छिटो चल्छन् कि हामी यसलाई हाम्रो वर्तमान अवस्थामा बुझ्न सक्दैनौं। यदि तपाईंसँग चारैतिर झन्डै पानीको बाल्टी छ भने, पानी बस बाल्टी मा रहन्छ।
साथै, कक्षहरूले सबै फारमहरू लिन सक्छन्, केवल कोड समायोजन गर्नुहोस्। केवल टिभि र इन्टरनेट केबल को माध्यम ले, हामी स्क्रिनमा सबै फारमहरू देख्न सक्छौं।
तपाईंको सिद्धान्तले हामीले यससँग राम्रोसँग फिट बस्नुअघि स्याउ पकडेको छ। म पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ कि हामीले पहिले यो अनुभव गरेका छौ। यो एटम र हव्वा थियो, यो हल्का गतिको गतिमा सुरू भयो जुन हामी (अस्थायी रूपमा) यो भौतिक संसार बुझ्दछौं। यो कुनै पनि घडीको लागि हेर्ने छैन कि समय, समय = अवलोकन / अवलोकन।
तपाईं यो साबित गर्न छैन, बस विश्वास गर्नुहोस्।
18 मई 2019 मा 21: 24
मलाई खुशी छ कि तपाईं जारी राख्नुहुन्छ!
त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जो वास्तवमा कुरा गर्ने कुरालाई उजागर गर्छन्। जब मानिसहरूले तपाईले लेख्नुभएको कुरा बुझ्न सुरु गर्दछन्, यसले अब तपाईंको धर्म वा जुनसुकैको लागि लड्नको लागि अर्थ बुझ्दैन। त्यसपछि तपाईंले देख्नु भएको छ कि केहि ज्ञान हामीलाई अनौठो बक्समा राख्न को लागी जानिन्छ।
हामी अन्य मान्छे विरुद्ध अदृश्य सिमुलेसन रक्षकहरूको विरुद्धमा लड्न सक्दैनौं।
तिनीहरू हामीलाई हाम्रो मूलबाट मीठो र टाढा राख्छन् जुन तपाईले के भन्नुहुन्छ कि हामी एप्पलमा पुग्छौं र अझ हाम्रो मूलबाट। यदि तपाइँ लाइभ बन्द गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई बुराई पाउनुहुन्छ।
19 मई 2019 मा 09: 27
पुरा तरिकाले सहमत हो, एक दया कि शिक्षा प्रणाली र यसैले
पृथ्वीमा लगभग सबै मानिसहरूको शिक्षा अनुपालन नियमहरूसँग छ। राम्रो / खराब पहिलो कुरा हो जुन तपाईंले सिक्न सक्नुहुन्छ।
हामी सही कुरा गर्न सक्दैनौं, दुर्भाग्यवश। बिजुली शिक्षा कार्यक्रम नियन्त्रणमा छ र मानिसहरू शिक्षा र विज्ञान मंत्रालयबाट उनीहरूको वेतन पर्चीको प्रतीक्षा गर्दै छन् र उनीहरूको शक्तिले उनीहरूलाई के गर्ने बताउने सन्तानहरूलाई के भन्छ, के गर्न?
तर रोचक रूपमा हामी अन्य मानिसहरूलाई विरुद्ध अदृश्य अनुकार गार्डको विरुद्ध "होइन" लडिरहेका छौं,
के ती सिमुलेशनका म्यानपावरहरू म्यानुअल वा विदेशी वा होलान् भन्ने हो भने तपाईं तिनीहरूसँग लड्नु हुँदैन भने के तपाइँ लड्नुहुन्छ?
19 मई 2019 मा 20: 53
मैले आफैलाई सोधे कि लुसिफर र तिनका सहयोगीहरू आत्माहरू हुन्, बुबालाई विदेशीहरूलाई गलत बुझाइन्छ। सम्भव छ कि हामी यस अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट हाम्रो बाटोमा काम गर्न सक्दछौं। लुसिफरले मात्र हाम्रो हात र रचनात्मकता संग काम गर्न सक्दछ। यदि तपाई आफैले आफ्नो फ्रिक्वेन्सी प्रशंसकलाई कम गर्नुहुन्छ भने तपाई आफैंलाई दुर्व्यवहार गर्नुहुनेछ। हामीसँग डराउने केही छैन यदि हामी जान्दछौं कि हामी अस्थायी रूपमा यहाँ छौं र उच्च आवृत्तिहरूमा लग इन गर्नु पर्छ। कुनै डर छैन!
जस्तो कि तपाईंले निस्सन्देह देख्नुभएको छ, लुसिफरको सम्मानमा गीत जीता छ।
मलाई मायालु एक खुसी खेल हो। उनी आफैले गाउन सक्दैनन् तर डनकनले यो गर्न दिन्छ, सम्भवतः डंकनले उनीहरूलाई पदोन्नति गर्न सकेनन्।
उसले यसलाई स्वीकार्छ भने, यदि तपाईं राजा हुनुहुन्छ भने यस नेदरल्यान्डमा विजेताले तपाईंलाई यो डराउन्डबाट रिलीज गरेन।
19 मई 2019 मा 23: 38
एलियन्सका लागि अर्को शब्द विदेशी छ। हामी एक्टर्राटररेडियल र लूसिफर पार्थिव हो।
तिनीहरू वरपर सबै चीजहरू बदलिन्छन्!
« क्या स्क्रिप्ट लेखकहरु संग मीडिया काम गर्दछ र उनि PsyOp अपरेशन को बेचते हो किनकी उनि टीवी शो संग गर्छन?
डनकन गाउन असमर्थ छ र यूरोभाइज गाउ प्रतियोगिता प्रतियोगिता (एलजीजीईटीपी प्रोभान्स) मार्फत आएको छ। »
कुल भ्रमण: 14.610.508